Ngazo zonke izikhathi Engxenyeni fair lesintu bazihlobise. Kungaba, namacici, imigexo, ngisho umhlobiso ezithile izizwe ezithile noma abantu. Nokho, namuhla ubuhle abesifazane wangenela nakakhulu, futhi yilezozintombi ngokuvamile ingaxazululwa at tattoo.
Namuhla kuba impela olufanele for girls tattoo emhlane wakhe. "Kungani" - kungenzeka umbuzo kunengqondo, akunjalo? Zonke elula kakhulu. Ngemva emuva - lena indawo lapho tattoo futhi uma ufuna ukufihla (emsebenzini kulena awukwazi ngisho enza thola cishile), noma ukubukisa (noma ogwini, egqoke ingubo ethile, ihembe). Kufanele kuqashelwe ukuthi sithathe tattoo for girls ngemuva kudingeka ngempela scrupulous kuveza pre hhayi kuphela sibalo, kodwa futhi impela lapho izokwenziwa. Phela, lokhu kuyikhono ukuthi ungakwazi ukuhlobisa njengomuntu ngalé obucayi njengabesifazane kanye kubonakale wayonakalisiwe kuye.
Ufuna ngokusebenzisa okukhethwa kukho amantombazane tattoo emhlane wakhe, kuyafaneleka ukuthi abavamile kakhulu abesifazane abasebancane uncamela imidwebo ivuliwe izindwani. Lapha ungafaka cishe yimuphi umfanekiso, ngoba lokhu ingxenye yomzimba oluphakeme bushelelezi futhi ezanele wizadi. Iphuzu elibalulekile lokuthi uma intombazane kancane kangcono, le ngxenye emuva washintsha kakhulu akuvamile, futhi lesi sibalo cishe bengathinteki. usayizi Tattoo zingase zishintshe kakhulu: kusuka izibalo ezincane kuya ezinguzungeni izithombe lonke. Ngakho, kubonakala umkhiqizo elihle isiyingi noma cruciform. Kodwa amehlo futhi emzimbeni, okungase ngikhishwa ehlombe entanyeni, emgogodleni, ukuhambisa izandla. Akuvamile ku izindwani ukwenza amalebuli, ngoba kulesi simo ibinzana ebhaliwe kufanele kube kunalokho esifushane futhi ivolumu ukubheka obunobunye. Ngokuqondene ihluzo ke akunakungatshazwa imikhawulo, konke kuncike isifiso noma ukunambitheka, izintokazi.
Kukuphi lapho zingafakwa tattoo for girls ngemuva? indawo Excellent - the loin. Kepha emaphethini, intombazane kungaba kancane ubuhlungu, ngoba isikhumba kule ndawo somzimba ngempela nomzimba omncane, bese ithambo elingaphansi iseduze. Akunconyelwe owesifazane onendlu tattoo emuva, futhi ngcono, ngoba umdwebo raspolztis izingozi. Kodwa lapha kakhulu, kule ndawo okungukuthi ngoba tattoo kakhulu kalula indlela fihla kusuka prying amehlo futhi baqhosha ke. Njengoba for ihluzo, ngokuvamile ngaphezulu basuke wabulawelwa inqubo tribal - iphethini izinhlangothi zazo ziyalingana. Ungase futhi izinto izimbali, izilwane. Kubukeka omkhulu futhi olandelayo tattoo ngemuva intombazane: okucashunwe ibekwe endaweni lumbar. Kuyinto kakade kungenzeka ukubhala ngisho yonke indaba, okuhle, kukhona isikhala esanele.
Njengoba kungase kubonakale akumangalisi, kodwa kungase zibukeke tattoo enhle futhi enkulu emuva sentombazane. Ake ubone ngeso lengqondo lesi isiqinisekiso. Laba besifazane bheka kumnandi, okungavamile, edonsa amehlo abanye. Ukudweba uqobo ungakwazi ikhave kokubili yonke emuva, kanye, isibonelo, esifundeni yomgogodla (rose enkulu enhle ku stem). Ungesabi ukuzijabulisa wona njengemisebenzi yobungcweti.
Amawashi UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki kwabesifazane labesilisa
Izicathulo Okungajwayelekile - lace amabhuzu
Image - kuyinto isihluthulelo sempumelelo
Indlela yokwenza skrini kwesikrini
Kuthiwani uma pawns indlebe kubangela kabi izindlela ukuqeda ke
Ithalente Welsh - Denni Uord
Ikhambi for komzimba: ukwelashwa kanye imithi abantu izindlela.